Ngaphambi You Qala | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Ngaphambi kokuthi uqale, ungahle uthande ukufunda ngomlando we-Evinrude noJohnson Outboards. Ngithole izindatshana ezilandelayo ziheha, ikakhulukazi izindaba ezikhuluma ngo-Oli Evinrude owadala imboni yonke eminyakeni eyikhulu eyedlule. Ukuqonda u-Oli Evinrude nomsebenzi wakhe wokuthuthukisa izinjini zasolwandle ezimbili kuzokunikeza ukwazisa okukhulu ngokuvela kwalezi zinjini. Esinye sezihloko ezingezansi sikhuluma ngendlela u-Oli Evinrude azame ngayo uhlobo lwakhe lokuqala lwemoto engaphandle ngo-100 emfuleni iMilwaukee. Ngiyazibuza ukuthi ngabe kukhona yini umaka ngokomlando kuleyo ndawo noma uma kukhona umuntu owake waqaphela iminyaka eyikhulu yasungulwa yomcimbi onjalo ongokomlando. Nginomndeni eMilwaukee, futhi ungabheja ukuthi ngolunye lwalezi zinsuku, ngizothatha isikebhe esincane kanye nemoto endala enginayo ngithole leyo ndawo ukuze ngizungeze ukusho ukuthi bengikhona. Ngihlela ukufunda kabanzi ngomlando wama-motor motors. IJohnson Motor Corporation iqalwe abanye abazalwane eTerre Haute Indiana. Lokhu ngamamayela angu-1909 kuphela ukusuka lapho ngihlala khona! U-Oli Evinrude unendodana, uRalph Evinrude, naye owaba neqhaza ekuthuthukiseni nasekuhlolweni kwama-motors esikebhe angaphandle. URalph Evinrude uhlanganiswe noJohnson ngo-100 ukwakha i-Outboard Motor Corporation eyaziwa namuhla njenge-OMC. UKarl Kiekhafer uqale iMercury Marine ngo-60, futhi leyo nkampani isaqhubeka nanamuhla. IMercury ibuye ibhekele ukuthuthuka okuningi kuma-motors esikebhe esinemijikelezo emibili.
UKarl Kiekhaefer, umsunguli womlando weMercury Marine Company
Ngaphambi kokuba uqale, udinga ukuthola ukuthi unayiphi imoto. Uzodinga ukwazi unyaka, imodeli nenombolo ye-serial yemoto yakho ukuze ukwazi ukuthenga izingxenye ezifanele futhi akudingeki uzibuyisele ukubuyiselwa imali. Umthengisi wezingxenye ezinhle ngeke afune ukukuthengisela noma yini ngemoto yakho ngaphandle kokuthi bazi ukuthi yini onayo. Ukuqagela imodeli nonyaka nje akusebenzi. Kuyamangaza ukuthi kulula kanjani ukukhohlwa unyaka wesikebhe sakho semoto. Uma uthola i-motor yesikebhe esidala, kungenzeka ukuthi awazi ukuthi yimuphi unyaka futhi uyimodeli. Inombolo yemodeli ivame ukuba kuthegi yensimbi enamathiselwe ohlangothini lwesobunxele lweyunithi engezansi. Kukhona amawebhusayithi ongaya kuwo futhi ufunde ukuthi ungaluthola kanjani ulwazi kunombolo yemodeli njengonyaka, noma ngabe ugesi noma ukuqala kwezintambo, shaft emfushane noma omude, futhi mhlawumbe nezinye izici ezinjengokuthi imoto ivela e-US noma eCanada. Futhi, umbala wepende wemoto uzokusiza ukunquma unyaka. Lapho usuyitholile imoto yakho, ungathola umuzwa wokuthi leyo moto ikhiqizwe iminyaka emingaki neminyaka emingaki. Lokhu kuzoba wusizo uma kukhulunywa ngokuthola izingxenye ngoba izingxenye zamanye ama-motors nazo zingasebenza kumoto yakho. Ngifunde okuningi ngokusesha e-Bay I-motors ezifanayo futhi ufunda ukuthi nabathengisi ayezokusho ngazo. I kubuye kuyindlela enhle ukuze uthole umbono walokho nibaluleke. Njengoba uqala umbe e-Bay, Ungase uqale ngisho ukubona ezinye izingxenye eyofanelana umshini wakho inikezwa ngenani omuhle.
Ingobo yomlando ubudala iwebhusayithi OMC ngonyaka imodeli-
Ngakuthola kuwusizo ukuthola izincwadi ezithile ezikhuluma ngendaba yokugcina ama-motors angaphandle. Kube wusizo ukufunda ukuthi zisebenza kanjani ama-motors wesikebhe sangaphandle. Lapho ngifunda futhi ngiqonda ngokwengeziwe, ngiya ngazisa ngokwengeziwe indlela elula ngayo le mishini. Iya kumtapo wezincwadi wangakini ubheke esigabeni sokubhekisisa lapho uzothola khona amabhukwana wezinsizakalo kanye nezincwadi zokulungisa izimoto ezijwayelekile. Ibhukwana lesevisi elimboza imoto yakho ethile lihlala lisiza.
Uzofuna ukuthola izinsiza ezinhle. Ngithole ukuthi uchungechunge lwe-NAPA lwezitolo zezingxenye zezimoto lunikeze ikhathalogi yezingxenye zasolwandle futhi kwangimangaza ukuthi babenezingxenye eziningi engangizidinga esitokweni esikhungweni sokusabalalisa sendawo. Esinye isitolo sezingxenye zezimoto iCarQuest sine- "Sierra Marine Parts Catalog" yaso into efanayo nezinombolo zezingxenye ezifanayo ezisetshenziswa ngabasebenzisi beNAPA. Ukuthola ukuthi yiziphi izingxenye ezidingekayo bekuyinselele. Lapho sengikwazi engikudingayo, i-NAPA yakwazi ukubathola ngokushesha. Ufuna futhi ukuthola umthengisi omuhle wezingxenye zasolwandle ze-OMC. Angithandi ukuthenga izinto kumthengisi wesikebhe futhi ngikhokhe amanani abo aphezulu okuthengisa, kepha kunezinto ezithile ongazithola lapho. Kunezindawo eziningana kuwebhu lapho ungathenga khona izingxenye zasolwandle. Udinga ukuthi uqiniseke ukuthi uyazi ukuthi okuthengayo empeleni yilokho okudingayo kumoto yakho engaphandle. Inkinga ngalaba bathengisi ukuthi bahloselwe ukuthengisa izingxenye zezimoto ezahlukahlukene. Kumaphrojekthi wami, nginezixhumanisi eziya ku-Amazon.com lapho ungathenga khona izingxenye ezithile engizisebenzisile. Ukuthenga kwa-Amazon kusiza ukusekela leli sayithi nokuxhasa amaphrojekthi aqhubekayo. Okunye okumele ukwenze ukubuka phezulu encwadini yezingcingo bese ubona ukuthi alikho yini igceke lokuhlenga isikebhe eduze kwakho. Ngithole enye engxenyeni eseningizimu ye-Indianapolis okuyibanga elifushane ukusuka lapho ngihlala khona futhi ngiyakujabulela ukuya lapho ukuze ngiqalaze nje.
Kunamabhodi wezingxoxo amahle amaningi lapho omakhenikha abanolwazi bezimisele ukuphendula imibuzo yokuzenzela wena ukulungisa abantu ngoba bethanda ukusiza. Isayithi elilodwa likhethekile engilithandayo http://www.iboats.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi Ngifunde okuningi ngokufunda imibuzo evela kubantu abanjengami abafuna ukulungisa imoto yabo endala yesikebhe. Kungimangazile ukuthi izithandani zokuqala ngithumele imibuzo futhi ngathola izimpendulo ezinhle kungakapheli nemizuzu, ngisho nasebusuku. Abanye balaba bantu abasemabhodini okuxoxa bangamamakhenikhi asemanzini anolwazi lweminyaka eminingi. Kubonakala sengathi bayathanda ukusiza abafana nami ngokunikeza izimpendulo nezeluleko. Njenganoma yini empilweni, ungahle unabantu abahlukahlukene abanikeze ngezixazululo ezahlukahlukene.
Kuyasiza futhi ukuthola indawo yokuthola umakhenikha wendawo noma umngani onolwazi ongazimisela ukukukhipha ngebheyili uma ungena entweni engaphezu kwekhanda lakho. Endabeni yami, nginomngani osebenzisa isitolo seLawnBoy. Ubuye wasebenza emarina ebusheni bakhe futhi kwadingeka alungise ama-motors amaningi angaphandle aqashiwe. Kunamaqhinga amaningi angasetshenziswa ukwenza umsebenzi wokulungisa lezi zinjini ube lula. Ngeke uthole amaningi ala maqhinga kumabhukwana ezinsizakalo ngoba kungenzeka angabi yisixazululo sezincwadi.
Hlela indawo enhle yokwenza lo msebenzi. Endabeni yami, nginegaraji namathuluzi ayisisekelo. Ngenze isitandi sezimoto ngabakaki abango- $ 5.00 be-sawhorse nama-2x4 ambalwa. Injini yami ngiyimise ivuleke kakhulu futhi nginemilenze eyengeziwe eyengeziwe ukuze kuthi lapho ngibambelela kuyo imoto yami engaphandle ngobude obutofotofo. Lapho ngenza amaphrojekthi egalaji lami, ngithanda ukusetha itafula lokugoqa ukubeka izingxenye namathuluzi futhi nginikele lelo tafula phezulu kuphrojekthi yami lize liphothulwe. Ngingahle ngibe namanye amaphrojekthi kwamanye amatafula aqhubekayo, kepha angithandi ukuhlanganisa amaphrojekthi wami.
Ungasheshi. Sethemba ukuthi wenza lokhu ukuze ujatshuliswe futhi waneliseke. Kimina, le iphrojekthi yasebusika engithemba ukuthi izongigcina ngingekho endlini, kude ne-TV, futhi ngicabanga ngezimpelasonto nakusihlwa eziningana. Uma ngifika lapho ngidinga khona ingxenye, ngizovele ngime, mhlawumbe ngenze umsebenzi wokuhlanza, ngiphume ngithole ingxenye engiyidingayo ngaphambi kokuqhubeka. Ukube bengingasebenza kulawa ma-motors kunoma iyiphi imodi yokukhiqiza, noma ikhasimende, angicabangi ukuthi ngingajabulela nhlobo. Njengoba ngenza lokhu ukuze ngijabule futhi ngigculiseke, ngibona ukusebenza kulezi zimoto njengokuzilibazisa, futhi ngingathatha sonke isikhathi engifuna ukusenza kahle umsebenzi.
Ngiyacela CHOFOZA LAPHA ukuze siqhubeke Projects zethu Page.